[Vaovao antoandro] Zoma 8 janoary 2021
♦ Niafara tamin'ny fanimbana zavatra sy fandrombana tao amin'ny Oniversiten'Antsiranana, ny hetsiky ny mpianatra alina... ♦ Nanaitra ny mponina teny Ampasanimalo sy ny manodidina ny fipoahana mafy nitranga omaly tokony ho tamin'ny 10 ora maraina... ♦ Mitohy ny fametraham-pialana ataon'ireo tompon'andraiki-panjakana any Etazonia...
[Vaovao maraina] Zoma 8 janoary 2021
♦ Tsy misy indrafo ho an'izay rehetra tompon'andraikitra tamin'ny fanondranana ireo volamena 73,5kg tatra tany Afrika Atsimo... ♦ Tanjona iray no iombonan'ny mpisehatra ara-pôlitika, dia ny fampandrosoana ny firenena, hoy ny filoha Andry Rajoelina... ♦ Mbola miteraka ady hevitra any Etazonia ny fanafihana sy herisetra nitranga tao amin'ny Capitole...
[Vaovao antoandro] Alakamisy 07 janoary 2021
♦ Nambara ofisialy androany ny anaran'izy 12 mianadahy lany ho loholon'i Madagasikara nandritra ny fifidianana natao ny 11 desambra teo. Ny talata 19 janoary izao no hivory voalohany ireo mpikambana vaovao... ♦ Nidina an-dalambe androany ny mpianatry ny ENS tao Antsiranana. Niafara tamin'ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana izany, nisy ireo mpianatra voasambotra...
[Vaovao maraina] Alakamisy 07 janoary 2021
♦ Nidina an-dalambe nitaky ny zony ny mpianatry ny ENS ao Ampefiloha. Niditra an-tsehatra nanapoaka baomba mandatsa-dranomaso ny mpitandro filaminana. Telo no voasambotra, naratra ny filohan'ny fikambanan'ny mpianatra... ♦ Toherin'ny filoha amerikana Donald Trump sy ny mpomba azy ny voka-pifidianana filoham-panjakàna ka nahalany an'i Joe Biden. Iray no maty vokatry ny hetsika nataon'izy ireo tao amin'ny foiben'ny kongresy amerikana omaly...
Pejy 9 amin'ny 105